မာနာမာမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ မြေပုံကို ပြသရန်
အာရပ်ကမ္ဘာ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ကိုဩဒိနိတ်: 26°13′30″N 50°34′39″E﻿ / ﻿26.22500°N 50.57750°E﻿ / 26.22500; 50.57750ကိုဩဒိနိတ်: 26°13′30″N 50°34′39″E﻿ / ﻿26.22500°N 50.57750°E﻿ / 26.22500; 50.57750
၃၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၀ စတုရန်းမိုင်)
• ခန့်မှန်း (2020)
၅,၂၀၀/km၂ (၁၃၀၀၀/sq mi)
• မြို့ပေါ် (2020)
မာနာမာမြို့(အာရပ်: المنامة‎ al-Manāma Bahrani pronunciation: [elmɐˈnɑːmɐ])သည် ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းလူဦးရေ ၂၀၀,၀၀၀ ဦးနေထိုင်ကြသည်။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ အရေးပါသော ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုချက် ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့သည့်အလျှောက် မာနာမာမြို့သည် အမျိုးမျိုးအပြားပြား လွန်စွာကွဲပြားသည် လူမျိုးတို့၏ နေထိုင်ရာနေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီတို့နှင့် ပါရှန်းတို့၏ ထိန်းချုပ်ခဲ့သော ကာလများနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အိုမန်မင်းဆက်တို့၏ ကျူးကျော်မှုများ လွန်မြောက်ခဲ့သောအခါ ဘာရိန်းသည် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဗြိတိသျှတို့၏ ကြီးစိုးမှုပြီးသည့် ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှစ၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အမြွှာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်သော မာနာမာမြို့နှင့် မဟေးရက်မြို့(Muharraq)တို့သည် ၁၈၀၀ ခုနှစ်များတွင် တပြိုက်နက်တည်း တည်ထောင်ခဲ့ကြသော်လည်း မဟေးရက်မြို့၏ ခံစစ်အတွက် အချက်အခြာကြမှုကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့်အတွက်ကြောင့် ၁၉၂၃ ခုနှစ် ဘရိန်းနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မာနာမာမြို့သည် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မြို့တော်နှင့် ဘာရိန်းကျွန်းမကြီး၏ ဝင်ပေါက်ဖြစ်၍လာခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစုနှစ်အတွင်း ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏ ရေနံကြွယ်ဝမှုသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာမှုကို အ‌ထောက်အကူပြုခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် စုပေါင်း၍ အမျိုးမျိုးသော ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတို့သည် အခြားသော လုပ်ငန်းများအား ချဲ့ထွင်ရာ၌ အကူအညီပေးခဲ့ပြီး မာနာမာမြို့အား အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ အရေးပါသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုချက်ဖြစ်ရလာခဲ့စေသည်။ မာနာမာမြို့သည် အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမြို့တော်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Globalization and World Cities Research Network ၏ ဘီတာဂလိုဘယ်စီးတီးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
↑ Annual Population of Urban Agglomerations with 300,000 Inhabitants or More in 2014, by Country, 1950–2030 (thousands), World Urbanization Prospects, the 2014 revision Archived 18 February 2015 at the Wayback Machine., Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs. Note: List based on estimates for 2015, from 2014. Retrieved 11 February 2017.
↑ Ministry of Culture: Manama as the Bahraini Capital of Arab Culture။ 11 September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 November 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ben Hamouche၊ Mustapha (2008)။ Manama: The Metamorphosis of an Arab Gulf City။ Routledge။ ISBN 9781134128211။
Dumper၊ Michael; Stanley၊ Bruce E. (2007)။ Cities of the Middle East and North Africa: A Historical Encyclopedia။ ABC-CLIO။ ISBN 9781576079195။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာနာမာမြို့&oldid=725885" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၁:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။